Etu aga - esi mee nyocha onye asọmpi maka ịmata ihe owuwu ụlọ njikọta | Martech Zone
Etu ị ga - esi mee nyocha onye asọmpi maka ịmata atụmanya njikọ ụlọ
Monday, July 19, 2021 Monday, July 19, 2021 Ọnye na -bụ Aleh Barysevich?
Kedu ka ị si achọta atụmanya backlink ọhụrụ? Fọdụ na-ahọrọ ịchọ weebụsaịtị na isiokwu yiri ya. Lookfọdụ na-achọ akwụkwọ ndekọ aha azụmahịa na ntanetị 2.0. Ma ụfọdụ na-azụ azụlinks na nnukwu ma nwee olile anya maka ihe kacha mma.
Mana enwere otu usoro ịchị ha niile yana ọ bụ nyocha asọmpi. Ebe nrụọrụ weebụ na -ejikọ ndị asọmpi gị nwere ike bụrụ ihe dabara adaba. Kedu ihe ọzọ, ha nwere ike mepere emepe mmekọrịta backlink. Ndị na-asọmpi gị arụla ọrụ niile ịchọta ha, yabụ ihe niile ị ga - eme bụ ịbanye ma were atụmanya ha maka onwe gị.
N'ime ntuziaka a, ị ga-amụta otu esi achọta ezigbo ndị asọmpi gị, chọpụta njikọ azụ azụ ha, ma binye ndị nwere ikike kachasị elu.
1. Chọta Ezigbo Ndị Asọmpi Gị
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọpụta ndị ezigbo ndị na - asọmpi ọchụchọ gị ma họrọ ndị kachasị mma ka ha gaa ledoo. Cheta na ndị na-asọmpi ọchụchọ gị abụghị otu ihe dịka ndị na-asọmpi ndụ gị. Kama, ndị a bụ weebụsaịtị ndị dị elu na nsonaazụ njin ọchụchọ gị (ỌRỤ), ntụgharị maka Keywords na niche gị. Nnyocha a nwekwara ike inyere gị aka ikpebi atụmatụ atụmatụ mmefu ego nke ọdịnihu gị njikọ njikọ ụlọ ọrụ.
Zọ kachasị mfe iji hụ ndị isi asọmpi gị bụ ịpịnye mkpụrụ okwu mkpụrụ gị na Google wee hụ ihe ngalaba na-apụta na Google SERP ọtụtụ mgbe. Ugbu a, ị ga-enweta ụfọdụ weebụsaịtị, dị ka Ahụike Ndị nwoke ma ọ bụ Forbes ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ndụ ndị ọzọ maka ogo mkpụrụ okwu niche, mana, mgbe ị nyochachara ole na ole, ị kwesịrị ịnwe ezigbo echiche nke onye na-arụ ọrụ na niche gị.
O doro anya na ị na-edegharị mkpụrụ okwu mkpụrụ gị niile ma na-ede weebụsaịtị nke kachasị maka ya anaghị arụ ọrụ nke ọma. Luckily, nyocha asọmpi bụ ihe ịma aka nkịtị maka SEO na ndị nwe weebụsaịtị, yabụ enwere ọtụtụ ngwaọrụ ọkachamara nwere ike ime ka usoro ahụ dị ngwa. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwá ọrụ SEO, ma ọ bụ Moz, Semrush, ma ọ bụ Ahrefs, ọ nwere ike ịnwe ụdị nyocha nke ndị asọmpi wuru. Dabere na ngwá ọrụ SEO ị na-eji, ị ga-enwe ike ịmata ndị asọmpi ọchụchọ gị ma ọ bụ site na isiokwu ma ọ bụ site na ngalaba, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ha abụọ.
Iji mata ndị asọmpi gị site na isiokwu, ị ga-aba ole na ole mkpụrụ Keywords na ngwá ọrụ ga-ahụ n'elu weebụsaịtị họọrọ maka ndị a Keywords ọtụtụ mgbe. Usoro a na - enye gị ohere ịkọọrọ ọnụ ma họrọ ndị na-asọ mpi na warara niche.
Iji mata ndị asọmpi site na ngalaba, ị ga-edo onwe gị n'okpuru ngalaba. Ngwá ọrụ ahụ ga - enyocha Keywords niile ị na - ahazi maka ma chọta weebụsaịtị nwere isi okwu kachasị ukwuu. Usoro a na - enyere gị aka ịchọta ebe nrụọrụ weebụ na - asọmpi nke yiri nke nrụọrụ weebụ gị, ọ bụ ezie na niche nwere ike ịba mbara karịa ka ị bu n'obi.
Ozugbo ị nwetara ndepụta nke ndị asọmpi, ọtụtụ ngwa ọrụ SEO ga-enye gị ohere inyocha ha site na iji ọtụtụ ogo ogo. Usoro ndị a na-ahụkarị gụnyere ikike ikike ngalaba, okporo ụzọ okporo ụzọ, na pacenti nke mkpụmkpụ isiokwu, yabụ etu websaịtị onye na-asọmpi siri dị nke gị. Jiri usoro ndị a iji họrọ n'etiti mmadụ ise na iri na-asọmpi kachasị elu maka nyocha ọzọ backlink.
2. Chọta backlinks nke ndị asọmpi gị
Ozugbo i mepụtara ndepụta nke ndị asọmpi gị kachasị mkpa, ịnwere ike ịkwaga iji nyochaa profaịlụ backlink ha.
Maka nlele ngwa ngwa nke backlinks nke osompi, ị nwere ike iji nke ọ bụla backlink checker ngwá ọrụ. Pịnye ngalaba nke onye asọmpi iji hụ ihu akwụkwọ doro anya nke jikọtara na weebụsaịtị, URLs ha jikọtara na ya, ederede arịlịka, ngalaba dị elu, ma njikọ ọ na-esochi ma ọ bụ:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme nyocha zuru ezu nke backlinks nke ndị asọmpi gị, ị ga-eji sọftụwia SEO ọkachamara. Ihe nyocha nke ndị na-asọmpi asọmpi ga-enye gị ohere ịchọpụta ọtụtụ ndị asọmpi n'otu oge, yana nzacha achọtara backlinks site na ikike, ọnọdụ, mkpado nofollow, ihe egwu ntaramahụhụ, na usoro ndị ọzọ:
O doro anya na, otu n'ime atụmatụ kachasị mma nke nchọpụta backlink bụ mgbe ị nwere ike ịhụ weebụsaịtị ndị ejikọtara na ndị asọmpi abụọ ma ọ bụ karịa. Weebụsaịtị ndị a bụ atụmanya backlink gị kachasị mkpa - ha nwere ike rụọ ọrụ n'ime niche gị ma nwee ike ịnwe mmekọrịta pụrụ iche na ndị asọmpi gị.
3. Họrọ Ihe Pụrụ Iche na Backlink Dị Ike
Ozugbo ị bupụtara ndepụta zuru ezu nke backlinks nke ndị asọmpi gị, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ puku, mgbe ụfọdụ iri puku kwuru iri puku weebụsaịtị. Nke doro anya na ọ ga-eme mkpọsa mgbasa ozi dị irè. E wezụga nke ahụ, ihichapụ anya nke backlink niile nke ndị asọmpi gị abụghị atụmatụ kachasị mma, ebe ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịnye obere backlinks dị ala nke ga-emerụ SEO gị naanị.
Iji belata ndepụta nke atụmanya backlink gị ruo nha njikwa, ịkwesịrị ịtụfu weebụsaịtị ndị na-enye obere backlinks. Ihe ndị a na-ahụkarị na-egosi ogo nke atụmanya azụlink gụnyere:
Ngalaba ikike. Nke dị elu karịa, ọ ka mma. Ngalaba ikike dị elu bụ ebe nrụọrụ weebụ nke onwe ha nwere ọtụtụ backlinks, ọdịnaya dị elu, na ezigbo ahụmịhe onye ọrụ, ya mere na-enyefe ikike karịa site na njikọ ha.
Dofollow / nofollow. N'adịghị ka njikọ nofollow, njikọ dofollow nwere ike ịfe ihe ọ linkụ linkụ njikọ na ibe ha. Njikọ Nofollow abaghị uru ọ bụla, mana ha anaghị atụnye ụtụ na ogo gị. Ọ dị mma ịnweta njikọ nofollow na profaịlụ gị, mana ị gaghị egbusi ihe onwunwe gị iji nweta ọtụtụ n'ime ha.
Njikọ njikọ. Dịka e kwuworo, ngalaba na-ejikọ mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa nke ndị asọmpi gị bara uru dị ka atụmanya backlink.
Ahụhụ ntaramahụhụ. Njikọ ndị sitere na ebe nrụọrụ weebụ nwere nsogbu nwere ọdịnaya dị nro ma ọ bụ nke na-enweghị isi, ọtụtụ mgbasa ozi, na ahụmịhe onye ọrụ nwere ike ịdọrọ gị na mmiri ọkụ na Google.
Dabere na ngwa ọrụ SEO nke ị chịkọtara atụmanya azụlink, ị ga-enwe ike iji ụfọdụ ma ọ bụ ihe ndị a niile dị n'elu iji nyochaa ndepụta nke backlinks. Were Moz dị ka ihe atụ, ị ga-enwe DA maka ngalaba ikike, Akara Spam, na Ebe ntanetị:
Ngwaọrụ SEO ndị ọzọ nwere ike ịnwe usoro dị iche iche ma ọ bụ aha dị iche iche maka otu metrics, mana usoro ahụ bụ otu. Ga-ekpebi ihe ụzọ gị (dịka ikike weebụ> 60; ntaramahụhụ> 50) ma nyochaa atụmanya gị. Gbanwee ntọala gị ruo mgbe ị ga-ahapụ ọnụ ọgụgụ dị mma nke atụmanya na nke a bụ ndepụta gị.
4. Bido Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Ugbu a na ị nwere ndepụta nke atụmanya dị elu, oge eruola ka ị chọpụta onye n'ime ha ga-adị njikere ịnabata backlinks gị.
Nzọụkwụ mbụ ị na-eme n'ịchụso mgbasa ozi gị bụ iji kewaa atụmanya gị n'akụkụ dị iche iche ma họrọ ụzọ dị mma iji wulite nkwukọrịta na ngalaba nke ọ bụla. Mepee ibe ndị ị họpụtara maka listi gị, wee lelee ebe a na-etinye backlinks na ibe ahụ. Ekekọrịta atụmanya dịka backlink context.
Ndị a bụ ihe atụ nke ihe njikọ backlink nwere ike ịdị ka:
akwụkwọ ndị ọbịa;
ebe nrụọrụ weebụ;
ndị mmekọ azụmahịa;
akwụkwọ ndekọ aha azụmahịa.
Ọ bụrụ na ị na-eji sọftụwia a raara onwe ya nye, ị ga-enwe ike ịkpado atụmanya gị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, detuo ngalaba olile anya backlink na mpempe akwụkwọ Excel, ma kaa edemede ndị dị na kọlụm na-esote:
Nwere ike ịtọzie atụmanya gị gaa na edemede, chọta ozi kọntaktị, wee bido ikwusa ozi ọma gị. Họrọ email ndebiri dika ụdị olile anya ahụ, ma kwuo kpọmkwem ihe ị ga-arịọ, yana ihe ị ga-enye nloghachi.
Cheta ime ka ozi izipu gi ihe nke gi. Ndị mmadụ anaghị enwe mmasị na leta dị ka bot, na-ehichapụkarị ha n’agụghị akwụkwọ.
Note: Investchọpụta atụmanya gị na-enye gị ohere ọzọ ịlele weebụsaịtị ha maka mkpa na ogo ma wepu ụfọdụ atụmanya ndị ọzọ na ndepụta ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọta na ụfọdụ weebụsaịtị bụ akwụkwọ azụmahịa, websaịtị weebụ 2.0, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ enwere onwe gị iji mepụta ọdịnaya, ọ dịghị mkpa ịbịakwute ha. Bugharịa ha na ndepụta dị iche iche ma debe backlinks nke gị na usoro achọrọ.
5. Nyochaa Profaịlụ Backlink gị
Nyochaa akụkọ ntolite backlink gị ga-eme ka ị hụ ma ọ bụrụ na backlinks ọhụrụ emeela mgbanwe ọ bụla na ọkwa gị, chọpụta ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma, ma nyochaa nsogbu ọ bụla na-eweta.
Mbubata nke backlinks dị ala na mberede bụ otu n’ime ihe ndị nwere ike ịchọ ka i lebara anya. Ọ nwere ike ịbụ ọjọọ SEO ọgụ site n'aka otu n'ime ndị asọmpi gị, ma ọ bụ njikọ ndị ahụ nwere ike ịpụta nke ọma, ma ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ SEO gị ịzụta njikọ dị ala maka weebụsaịtị gị. Mana ihe kpatara ya, ịrị elu na spammy nwere ike ịdọrọ uche Google ma nweta ntaramahụhụ. Na iweghachite na ntaramahụhụ dị otú ahụ nwere ike were ọtụtụ ọnwa ruo, nke ọma, ọ dịghị mgbe.
Ọ bụrụ na ị hụ uto enyo enyo nke ọnụ ọgụgụ backlinks na weebụsaịtị gị, gbaa mbọ chọpụta ma njikọ ndị a ha dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ na ebee ka ha si. Ọ bụrụ na njikọ ndị ahụ adịghị mma, gbalịa ịkpọtụrụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ ma rịọ ha ka ha wepu ma ọ bụ opekata mpe njikọ ndị a. Ọ bụrụ na ọ nwere ike ghara ime, mgbe ahụ i nwere ike iji Ngwá ọrụ disavow nke Google ịgwa Google na ọ nweghị ihe ị ga-eme ha.
Mbupute mberede na backlinks dị elu bụ ihe ọzọ nke nwere ike ịchọ nlebara anya gị. Nke a nwere ike ime n'ihi na ibe njikọ ahụ kwagara URL ọzọ, ehichapụ ya, ọdịnaya ọdịnaya peeji ahụ agbanweela, ma ọ bụ ehichapụ backlink n'onwe ya ma ọ bụ dochie ya na njikọ nke onye na-asọmpi gị. N'okwu a, ịkwesịrị ịkpọtụrụ onye mmekọ backlink iji hụ ihe mere wee weghachite backlink ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Echefukwala ileba anya na profaịlụ backlink nke ndi ozo. Lezienụ anya na mberede na nso nso a na backlink nke ukwu. Ọ bụrụ na enwere, chọpụta ebe ha si bịa. Ọ bụrụ na atụmanya ọhụụ pụtara na ọ bụ ihe ekwere, tụlee itinye ya na mgbasa ozi gị, kwa.
Nyocha asọmpi bụ ụzọ kachasị dị irè maka ịchọta atụmanya backlink dị mma. Enweghị ụzọ ọzọ ọ bụla nwere ike isi nyefee ogo a dị mkpa. Ndị ndu ahụ na-ekpokwa ọkụ, ebe ọ bụ na ndị asọmpi gị enweelarịrị itinye backlinks ha ebe ahụ. ọ bụ n'ezie ebe ịmalite ịmalite backlinks gị ma ọ bụ ihe ị ga-anwale ma ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya.
Tags: nyocha backlinkbacklink osompi analysisnjikọ azụlinkmmekọrịta backlinknjikọ azụnyocha onye asọmpiụlọ njikọnjikọ njikọ ụlọ ọrụnjikọ njikọ ụlọnjikọtanyocha ọchụchọsearch engine njikarịchanyocha seoseo poweruite
Ọnye na -bụ Aleh Barysevich?
Aleh Barysevich bụ onye guzobere na onye isi ndị isi ahịa na ụlọ ọrụ ndị dị n'azụ SEO PowerSuite, sọftụwia ọkachamara maka mkpọsa SEO zuru ezu, yana Awario, usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ngwa nlekota weebụ. Ọ bụ ọkachamara SEO na ọkà okwu na nnukwu ụlọ ọrụ nzukọ, gụnyere SMX na BrightonSEO.
Stirista na-enye ikike eserese ọhụụ ya na data oge